သင် Golden Myanmar Airlines စီးနေကြလား? | yathar Magazine
သင် Golden Myanmar Airlines စီးနေကြလား?
မွနျမာပွညျတှငျး ခရီးစဉျတှကေို ပွေးဆှဲလြှကျရှိတဲ့ Golden Myanmar Airlines မှ မွနျမာပွညျတှငျး ဘယျခရီးစဉျတှေ ပွေးဆှဲနလေဲ ခရီးသညျတှအေပျေါ ဘယျလို စတေနာထားပွီး ဘယျလို service မြိုးတှပေေးနလေဲ ဆိုတဲ့အကွောငျးကို အငျတာဗြူးလေး မေးမွနျးထားပါတယျ။
Q1 အဈကို့နာမညျလေးနဲ့ အဈကို အဓိက တာဝနျယူထားတဲ့ အပိုငျးလေးကို တဈခကျြလောကျွပောပွပေးပါဦးရှငျ့
Ans မင်ျဂလာပါ။ ကြှနျတျောက နလေငျးကိုကိုပါ။ ကြှနျတျောက Golden Myanmar လကွေောငျးလိုငျးမှာ cabin crew manager ရာထူးနဲ့ လုပျကိုငျနပေါတယျ။ ကြှနျတျော အဓိက တာဝနျယူထားတဲ့အပိုငျးကတော့ On-Board Service နဲ့ ပတျသကျပွီးတော့ လယောဉျမောငျမယျတှကေို သငျတနျးပေးရပါတယျ။ flight တဈခု operate လုပျတဲ့အခါမှာ on-board ရဲ့ Safety ရော Service ရော ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ တာဝနျယူထားရပါတယျ။
Q2 Golden Myanmar Airlines မှာ ဘယျခရီးစဉျတှေ ပွေးစှဲလြှကျရှိပါသလဲ။
Ans လကျရှိ Golden Myanmar Airlines က ရနျကုနျကနေ ညောငျဦး၊ မန်တလေး၊ မွဈကွီးနား၊ ပူတာအို၊ ဟဲဟိုး၊ တာခြီလိတျ၊ လားရှိုး၊ သံတှဲ၊ စဈတှေ တို့ကို ပြံသနျးနပေါတယျ။
Q3 Golden Myanmar Airlines မှာ ခရီးသညျတှကေို ဘယျလို service မြိုးတှပေေးပါသလဲ။
Ans ကြှနျတေျာ့တို့ လကွေောငျးလိုငျးက လကျမှတျဝယျတဲ့အခြိနျကနစေပွီး လဆေိပျကိုရောကျလို့ Check-in ကောငျတာကို ရောကျလာပွီဆိုရငျ ခရီးသညျရဲ့ စိတျတိုငျးကြ စိတျခမျြးသာစရေပါမယျ။ On-Board ကိုရောကျပွီဆိုရငျလညျး လယောဉျမောငျမယျတှရေဲ့ ခြိုသာတဲ့အပွုံးနဲ့ သှားတဲ့ ခရီးစဉျတဈလြှောကျ စိတျသကျတောငျ့သကျသာ၊ ဘေးအန်တရာယျကငျးရှငျးစှာနဲ့ ခရီးစဉျကို ရောကျသှားဖို့ကတော့ သခြောပါတယျ။
Q4 အစားအသောကျပိုငျးမှာရော ဘယျလို service မြိုးတှေ ပေးလဲ။
Ans အစားအသောကျပိုငျးမှာဆိုရငျ ကြှနျတျောတို့က ပုံမှနျအားဖွငျ့ Refreshment တှေ Snack တှကြှေေးပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က sector တိုငျးမှာ Refreshment တှပေါပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကြှနျတျောတို့က circle ၄ ခုနဲ့ နှဈပတျတဈခါ menu ခြိနျးပေးပါတယျ။ ဘာ့ကွောငျ့လဲဆိုတော့ ပုံမှနျခရီးသညျတှေ ဒီလယောဉျပျေါရောကျတာနဲ့ မုနျ့တှကေို စားခငျြစဖှယျဖွဈအောငျ menu တှကေို အပွောငျးအလဲလုပျပေးထားပါတယျ။ catering ကိုတော့ အခုလကျရှိ Life Bakery ကယူနပေါတယျ။ ၂၀၂၀ မှာတော့ နောကျထပျ Catering တဈခုနဲ့ ခြိတျဖို့ လုပျထားတာရှိပါတယျ။
Q5 ဘာ့ကွောငျ့ ဒီ Catering ကို ရှေးဖွဈသှားတာလဲ။
Ans Catering ကိုကတြော့ ရုံးခြုပျကနေ ဒီ Catering နဲ့ ဒီလို contract ရှိတဲ့အကွောငျးရောကျလာတော့မှ ကြှနျတျောတို့ cabin crew ဘကျနေ Catering ဘကျကနေ Orientation သှားရတယျ။ ကြှနျတျောတို့ရဲ့ criteria တှနေဲ့လညျး ညီတယျ။ On-Board safety နဲ့လညျးညီတယျဆိုရငျတော့ ကြှနျတျောတို့က catering ကို စတငျပါတယျ။
Q6 Golden Myanmar Airlines ရဲ့ ခရီးသညျတှကေိုရော ဘာပွောပွခငျြသေးလဲရှငျ့။
Ans Golden Myanmar Airlines ကို ကြှနျတျောတို့က 2012 ခုနှဈက စတငျတညျထောငျထားတဲ့ လကွေောငျးလိုငျးဖွဈပါတယျ။ အခုဆကျပွီးတော့ ကွိုးစားနကွေပါတယျ။ ခရီးသညျတှအေကုနျလုံးသညျ ယုံကွညျစိတျခစြှာနဲ့ ဘေးအန်တရာယျကငျးကငျးနဲ့ ပြျောပြျောရှငျရှငျနဲ့ ခရီးစဉျတှဖွေဈစမေယျလို့ ဖိတျချေါခငျြပါတယျ။ ကြှနျတျောတို့က high season မှာ schedule တှေ ထပျတိုးဖို့လညျးရှိပါတယျ။
အခုလို ဖွကွေားပေးပါသော Golden Myanmar Airlines မှ cabin crew manager နလေငျးကိုကို ကိုလညျး ညီမတို့ Yathar Team မှ ကြေးဇူးအထူးတငျရှိပါတယျ။
စာဖတျသူအပေါငျးလညျး ခရီးသှားရာသီ ရောကျလာပွီမလို့ ခရီးစဉျတှကေို Golden Myanmar Airlines မှာ လကျမှတျတှေ ဝယျယူနိုငျပွီဆိုတဲ့ အကွောငျးလေးလညျး မတ်ေတာလကျဆောငျအနနေဲ့ ပွောကွားလိုကျပါတယျနျော။
မြန်မာပြည်တွင်း ခရီးစဉ်တွေကို ပြေးဆွဲလျှက်ရှိတဲ့ Golden Myanmar Airlines မှ မြန်မာပြည်တွင်း ဘယ်ခရီးစဉ်တွေ ပြေးဆွဲနေလဲ ခရီးသည်တွေအပေါ် ဘယ်လို စေတနာထားပြီး ဘယ်လို service မျိုးတွေပေးနေလဲ ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အင်တာဗျူးလေး မေးမြန်းထားပါတယ်။
Q1 အစ်ကို့နာမည်လေးနဲ့ အစ်ကို အဓိက တာဝန်ယူထားတဲ့ အပိုင်းလေးကို တစ်ချက်လောက်ပြောပြပေးပါဦးရှင့်
Ans မင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော်က နေလင်းကိုကိုပါ။ ကျွန်တော်က Golden Myanmar လေကြောင်းလိုင်းမှာ cabin crew manager ရာထူးနဲ့ လုပ်ကိုင်နေပါတယ်။ ကျွန်တော် အဓိက တာဝန်ယူထားတဲ့အပိုင်းကတော့ On-Board Service နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ လေယာဉ်မောင်မယ်တွေကို သင်တန်းပေးရပါတယ်။ flight တစ်ခု operate လုပ်တဲ့အခါမှာ on-board ရဲ့ Safety ရော Service ရော ကျွန်တော့်အနေနဲ့ တာဝန်ယူထားရပါတယ်။
Q2 Golden Myanmar Airlines မှာ ဘယ်ခရီးစဉ်တွေ ပြေးစွဲလျှက်ရှိပါသလဲ။
Ans လက်ရှိ Golden Myanmar Airlines က ရန်ကုန်ကနေ ညောင်ဦး၊ မန္တလေး၊ မြစ်ကြီးနား၊ ပူတာအို၊ ဟဲဟိုး၊ တာချီလိတ်၊ လားရှိုး၊ သံတွဲ၊ စစ်တွေ တို့ကို ပျံသန်းနေပါတယ်။
Q3 Golden Myanmar Airlines မှာ ခရီးသည်တွေကို ဘယ်လို service မျိုးတွေပေးပါသလဲ။
Ans ကျွန်တော့်တို့ လေကြောင်းလိုင်းက လက်မှတ်ဝယ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီး လေဆိပ်ကိုရောက်လို့ Check-in ကောင်တာကို ရောက်လာပြီဆိုရင် ခရီးသည်ရဲ့ စိတ်တိုင်းကျ စိတ်ချမ်းသာစေရပါမယ်။ On-Board ကိုရောက်ပြီဆိုရင်လည်း လေယာဉ်မောင်မယ်တွေရဲ့ ချိုသာတဲ့အပြုံးနဲ့ သွားတဲ့ ခရီးစဉ်တစ်လျှောက် စိတ်သက်တောင့်သက်သာ၊ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းစွာနဲ့ ခရီးစဉ်ကို ရောက်သွားဖို့ကတော့ သေချာပါတယ်။
Q4 အစားအသောက်ပိုင်းမှာရော ဘယ်လို service မျိုးတွေ ပေးလဲ။
Ans အစားအသောက်ပိုင်းမှာဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ပုံမှန်အားဖြင့် Refreshment တွေ Snack တွေကျွေးပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က sector တိုင်းမှာ Refreshment တွေပါပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့က circle ၄ ခုနဲ့ နှစ်ပတ်တစ်ခါ menu ချိန်းပေးပါတယ်။ ဘာ့ကြောင့်လဲဆိုတော့ ပုံမှန်ခရီးသည်တွေ ဒီလေယာဉ်ပေါ်ရောက်တာနဲ့ မုန့်တွေကို စားချင်စဖွယ်ဖြစ်အောင် menu တွေကို အပြောင်းအလဲလုပ်ပေးထားပါတယ်။ catering ကိုတော့ အခုလက်ရှိ Life Bakery ကယူနေပါတယ်။ ၂၀၂၀ မှာတော့ နောက်ထပ် Catering တစ်ခုနဲ့ ချိတ်ဖို့ လုပ်ထားတာရှိပါတယ်။
Q5 ဘာ့ကြောင့် ဒီ Catering ကို ရွေးဖြစ်သွားတာလဲ။
Ans Catering ကိုကျတော့ ရုံးချုပ်ကနေ ဒီ Catering နဲ့ ဒီလို contract ရှိတဲ့အကြောင်းရောက်လာတော့မှ ကျွန်တော်တို့ cabin crew ဘက်နေ Catering ဘက်ကနေ Orientation သွားရတယ်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ criteria တွေနဲ့လည်း ညီတယ်။ On-Board safety နဲ့လည်းညီတယ်ဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့က catering ကို စတင်ပါတယ်။
Q6 Golden Myanmar Airlines ရဲ့ ခရီးသည်တွေကိုရော ဘာပြောပြချင်သေးလဲရှင့်။
Ans Golden Myanmar Airlines ကို ကျွန်တော်တို့က 2012 ခုနှစ်က စတင်တည်ထောင်ထားတဲ့ လေကြောင်းလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အခုဆက်ပြီးတော့ ကြိုးစားနေကြပါတယ်။ ခရီးသည်တွေအကုန်လုံးသည် ယုံကြည်စိတ်ချစွာနဲ့ ဘေးအန္တရာယ်ကင်းကင်းနဲ့ ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ ခရီးစဉ်တွေဖြစ်စေမယ်လို့ ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က high season မှာ schedule တွေ ထပ်တိုးဖို့လည်းရှိပါတယ်။
အခုလို ဖြေကြားပေးပါသော Golden Myanmar Airlines မှ cabin crew manager နေလင်းကိုကို ကိုလည်း ညီမတို့ Yathar Team မှ ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်။
စာဖတ်သူအပေါင်းလည်း ခရီးသွားရာသီ ရောက်လာပြီမလို့ ခရီးစဉ်တွေကို Golden Myanmar Airlines မှာ လက်မှတ်တွေ ဝယ်ယူနိုင်ပြီဆိုတဲ့ အကြောင်းလေးလည်း မေတ္တာလက်ဆောင်အနေနဲ့ ပြောကြားလိုက်ပါတယ်နော်။
ဂျပန်အစားအစာတွေ အသစ်ဆန်းတွေ ဖန်တီးနေတဲ့ Ember Japanese Restaurant ရဲ့ စားဖိုမှုးလည်းဟုတ်၊ ဆိုင်ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ Gabriel နှင့်တွေ့ ဆုံ ခြင်း